China PI Heater Film (ပါးလွှာသောဖလင် PCB) ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |Xinhui
Polyimide film PI လျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်ကို အပူချိန်မြင့်မြင့်နှင့် ဖိအားမြင့်အပူပေါင်းစပ်မှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အတွင်းပိုင်းလျှပ်ကူးအပူပေးကိုယ်ထည်အဖြစ် အပြင်ဘက် insulator နှင့် nickel-chromium alloy etching heating sheet အဖြစ် polyimide film ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။polyimide လျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်သည် အထူးကောင်းမွန်သော လျှပ်ကာစွမ်းအား၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော အပူကူးယူမှုထိရောက်မှု၊ နှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော ခံနိုင်ရည်တည်ငြိမ်မှုရှိသောကြောင့် ၎င်းကို လျှပ်စစ်အပူပေးခြင်းနယ်ပယ်တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။
◆ကောင်းမွန်သောပျော့ပျောင်းမှု၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ အမြန်အပူပေးသည့်အမြန်နှုန်းနှင့် တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း။
◆ အလွန်ပါးလွှာသည်- အထူသည် 0.3 မီလီမီတာသာရှိပြီး မျက်နှာပြင်သည် ပြားချပ်ချပ်ဖြစ်ပြီး နေရာလွတ်သည် သေးငယ်ကာ ကွေးညွှတ်သည့်အချင်းဝက်သည်5မီလီမီတာခန့်ရှိသည်။
◆အမျိုးမျိုးသောမျိုးကွဲများ- သေးငယ်သောဧရိယာ ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဆားကစ်ဒြပ်စင်များကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
◆တူညီသောအပူပေးခြင်း- etching လုပ်ငန်းစဉ်၏ circuit layout သည် တစ်ပြေးညီဖြစ်ပြီး၊ thermal inertia သည် သေးငယ်သည်၊ ၎င်းသည် အပူခံကိုယ်ထည်နှင့် နီးကပ်စွာထိတွေ့နေပြီး အပူအမြန်နှုန်းသည် မြန်ဆန်သည်။
◆တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်- နှစ်ထပ်တိပ်ဖြင့်၊ ၎င်းကို အပူပေးထားသောကိုယ်ထည်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ကပ်နိုင်သည်။
◆ကြာရှည်ခံခြင်း- အခြားအပူပေးဝါယာကြိုးအပူပေးစက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပြားချပ်ချပ်ဒီဇိုင်း၊ ပါဝါဝန်နည်းပါးခြင်း၊ နှင့် တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း။insulation ကောင်းတယ်။
◆ မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့် ဖိအားမြင့်စမ်းသပ်မှု- ၎င်းကို 200 ℃တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။1500V မြင့်မားသောဗို့အားစမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။
◆လျှပ်ကာနှင့်အပူစီးကူးမှုအလွှာ- polyimide ဖလင်
◆အထူ- 0.3 မီလီမီတာခန့်
◆ Compressive strength: 1500v/5s
◆အလုပ်အပူချိန် -60-200 ℃
◆ပါဝါ- ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်အရ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
◆ Lead tensile strength: >5N
1. သိပ္ပံနည်းကျခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတူရိယာများဖြစ်သည့်- optoelectronic အစိတ်အပိုင်းများ၏ လည်ပတ်အပူချိန်ကို တည်ငြိမ်စေရန် အပူစီးကူးမှု (သို့မဟုတ် အပူလျှပ်ကာ coefficient) စမ်းသပ်ကိရိယာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ စသည်တို့အတွက် အဆက်မပြတ်အပူချိန်အရင်းအမြစ်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
2. နက်ရှိုင်းသောအေးသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ တူရိယာနှင့်ပစ္စည်းများကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သောအပူချိန်သို့ရောက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ဥပမာ- ဂြိုလ်တုတုများ၊ အာကာသယာဉ်များနှင့် လေယာဉ်ပျံများကဲ့သို့သော ကိရိယာများနှင့် အဆောက်အဦများ၊ လတ္တီတွဒ်မြင့်သောနေရာများတွင် အသုံးပြုသည့် တူရိယာများနှင့် ကတ်ဖတ်စက်များ၊ အရည်ပုံဆောင်ခဲဖန်သားပြင်များ၊ LCD များနှင့် အခြားတူရိယာများကဲ့သို့သော အပူချိန်နိမ့်နိမ့်များကို ကာကွယ်ရန် တူရိယာများ။
3. ဖုန်စုပ်စက်အပူနှင့် မုန့်ဖုတ်ကွင်း။
4. မော်တော်ယာဥ်ဆီ ဒယ်အိုးကို အပူပေးခြင်း၊ နောက်ကြည့်မှန် ဖြူးစေခြင်း၊
5. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စောင့်ရှောက်မှုနှင့် အလှအပဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာလုပ်ငန်း။
ယခင်- PET အပူပေးရုပ်ရှင် (Flexible PCB)
နောက်တစ်ခု: LCM (LCDModule) ထုတ်လုပ်သူ/ထုတ်လုပ်သူများ